BBC-da Oo Soo Bandhigtay Xog ku Saabsan Tirada Iiraan Ugu Dhimatay Feyriska Corona | Gaaroodi News
BBC-da Oo Soo Bandhigtay Xog ku Saabsan Tirada Iiraan Ugu Dhimatay Feyriska Corona
August 3, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Iran ayaa ka mid ah dalalka uu sida ba’an ugu dhuftay cudurka safmarka ee Corona marka la eego dalalka bariga dhexe.
Tirada dadka u dhintay feyriska Corona ee dalka Iiraan ayaa ku soo saddex jibaarmaysa tirada ay shaacisay dowladda Iiraan, Waxaa sidaasi lagu ogaaday baaritaan ay saamaysay laanta BBC ee luuqadda Persia.
Diiwaanka dowladda Iiraan ayaa muujinaya in dad gaaraya 42,000 oo qof ay caalamadaha feyriska Covid-19 u dhinteen ilaa 20 July.
Tiradan ayaa ka badan middii ay sida rasmiga ah u shaacisay wasaaradda caafimaad taasi oo ahayd 14,405.
Tirada uu soo ritay feyriska Corona ee dalka Iiraan ayaa sidoo kale ay dowlada hoos u dhigtay islamarkana ah laba jibaar tirada rasmiga ah ee la shaaciyay.
Tirada uu soo ritay feyriska Corona dalka Iiraan ayaa dhan 451,024, taasi oo ka badan tirada rasmi ahaan loo shaaciyay oo dhan 278,827.
Toddobaadyadii u dambeeyay waxaa dalkaasi mar kale ku soo laba kacleeyay feyriska islamarkana waxa sare u kacday tirada kiisas dadka uu so ridanayo.
Sida ku cad diiwanka caafimaadka ee BBC loo soo dusiyay kiiskii ugu horeeyay ee feyriska Corona ayaa laga diiwaangaliyay Iiraan 22 January.
Waxay arrintani micnaheedu tahay in cudurka uu dalkaasi ka jiray ku dhawaad bil ka hor markii ay sida rasmiga ah u shaacisay dowladda. Dowladda Iiraan ayaa soo saartay tallaabooyiin ay ku xakameynayso feyriska
Tan iyo intii uu feyriska ka dilaacay dalka Iiraan, qaar badan oo ka mid ah dadka u kuurgala arrimaha dalkaasi ayaa waxay shaki ka muujinayeen tirada rasmiga ah ee dadka uu haleelay iyo dhimashada labaduba.
Khubarada caafimaadka ayaa waxay sheegeen in ay hooseeyso heerka awoodda baaritaanada cudurka guud ahaan dalkaasi.
Balse macluumaadka loo soo dusiyay BBC ayaa shaaca ka qaadaya in xukuumadda Iiraan maalinkiiba ay tiro hoseeysa shaacinaysay, iyada ay jirto in la diiwaangaliyay dhammaan dadka u dhintay cudurka taasi oo muujinaysa in si ula kac ah tirada hoos loogu dhigayay.
‘Shaaca ka qaadida runta’
Xogtan ayaa waxaa BBC la wadaagay ilo aan magacyadooda shaacin.
Waxaa ka mid ah macluumaadka tirada isbataalada dalkaasi Iiraan la dhigi jiray maalin kasta, waxaana ku jira magacyada,da’da, jinsiga, calaamadaha iyo muddada ay bukaanadan isbataalada ku jireen.
Ila wareedyadan ayaa sheegay in sababta ay BBC ula wadaageen macluumaadkan ay tahay “si ay shaaca uga qaadaan runta” islamarkana loo soo afjaro”ciyaarta siyaasadeed ” ee ku xeeran feyriska Corona.